Volocopter Chengdu: Nyowani yeGerman-Chinese yekudyidzana yendege yakaziviswa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Volocopter Chengdu: Nyowani yeGerman-Chinese yekudyidzana yendege yakaziviswa
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Germany Kuputsa Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
UAM inoreva nzira nyowani yekufambisa kwemaguta iyo inoshandisa magetsi emagetsi kusimuka uye kumhara (eVTOL) ndege kutamisa vanhu kana zvinhu mukati mezasi kwemadhorobha nemumaguta emumaguta. Inobatsira kubvisa kunetseka mumigwagwa yeguta iri kuwedzera kuwanda uye inobvumira vanhu nenhumbi kuti vasvike kwavanoenda nekukurumidza uye zvakachengeteka.
Volocopter yeGerman inosangana neGeely Holding Group kutanga mubatanidzwa muChengdu, China.
Mubatanidzwa uyu unobata kugadzirwa uye musika kushanda kweVolocopter zvigadzirwa mumusika weChina.
Mubatanidzwa uyu unoronga kubatsira kusimudzira kufamba kwemweya mumaguta kuChina mumakore matatu kana mashanu anotevera.
Kambani nyowani yendege yakabatana, inonzi Volocopter (Chengdu) Technology Co, Ltd., kana Volocopter Chengdu muchidimbu, yakaziviswa neGolocopter yeGerman, nyanzvi mukugadzirwa kwemotokari dzemhepo dzakazvimiririra, uye chikamu chechipiri cheGeely Holding Boka.
Mubatanidzwa uyu uchave muChengdu, guta guru rekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweChina Sichuan Province, uye ichatora basa rekugadzira uye musika wezvigadzirwa zveVolocopter mumusika weChina.
Volocopter Chengdu akasainawo odha neVolocopter yendege zana nemakumi mashanu, kusanganisira zvinhu zvisina kufambiswa nemotokari dzemuchadenga nendege dzakagadzirwa.
Mota dzemumhepo uye zvikamu zvavo zvichagadzirwa muHubei Geely Terrafugia, chigadziko chekugadzira cheGeely muChina, sekubatana kwacho.
Volocopter Chengdu achaendawo ku13th China International Aviation uye Aerospace Exhibition (Airshow China) musi waGunyana 28.
"Nhasi kunoratidza chimwe chiitiko chakakosha parwendo rwedu kuunza magetsi emagetsi asingakwanise kuenda kuChina, mukana wakakura kwazvo wemusika weindasitiri yeUAM," akadaro Florian Reuter, CEO we Volocopter.
Volocopter parizvino ndiyo yekutanga nyika uye chete eVTOL ndege inogadzira iyo yakawana dhizaini uye kugadzirwa kwemvumo kubva European Union Aviation Kuchengetedza Agency.